Chris Rock ကို အော်စကာစင်မြင့်ပေါ် ထိတက်ပီး Will Smith ရိုက်လိုက်ချိန်မှာ သူ့ ဇနီး ဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ….(ရုပ်သံ) – Shwe Likes
Chris Rock ကို အော်စကာစင်မြင့်ပေါ် ထိတက်ပီး Will Smith ရိုက်လိုက်ချိန်မှာ သူ့ ဇနီး ဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ….(ရုပ်သံ)
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြီး ခဲ့တဲ့ေ အာ်စ ကာ ဆုပေးပွဲမှာ Will Smith တစ်ယောက် Chris Rock ကို ပါးရိုက်လို က်ချိန်ရို က်ကူး ထားတဲ့ Video အသစ် တစ်ခု ပြန့်လာ ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Video ထဲမှာ ပါးရိုက် လိုက်ပြီးြ ပီးချင်း Will Smith ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ Jada Pinkett Smith ဘာလုပ်ေ နလဲဆိုတာ ကို တွေ့ရမှာပါ။
ပွဲထဲမှာ ပဲရိုက် ကူး ထား တဲ့ အဲ့ဒီ Video ထဲမှာဆို Smith က Chris ကိုရိုက်ပြီး ထိုင်ခုံပေါ်ြ ပန်လာ ထိုင်ချိန် Pinkett Smith တစ်ယောက် ထိုင်နေရင်း နဲ့ခန္ဓာကို ယ်ကို ရှေ့ကိုကိုင်းညွတ်လို က်တာ ကို မြင်ရမှာပါ။ Video ကိုအောက်ပါ link မှာဝင်ရော က်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ တယ်။
“Will Smith just smacked the s— out of me” လို့ Chris ကပြောပြီးပြီးချိန်မှာပဲ သူမခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ကိုကိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။Video ကတော့သူ ့နောက်ကရိုက်ထားတာမလို့ မျက်နှာကိုမြ မင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ခါရ ယ်မောပြီး Will Smith သူ့ဘေးမှာပြန်ထိုင်ချိန် ပြုံးနေတာ ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။
အဲ့ဒီည၊အဲ့ဒီဆုပေးပွဲမှာပဲ Will Smith ဟာ King Richard ရုပ်ရှင်ကားနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခုချိန် မှာတော့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါ။
အရိုက်ခံခဲ့ရသူ Chris Rock ကတော့ အမှုဖွင့်တိုင်ြ ကားဖို့ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး Will Smith ကလ ည်းလူမှုကွန်ယ က်ကနေတဆင့် Chris ကိုပြန်လည်ေ တာင်းပန် ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော်စကာဘုတ်အဖွဲ့ကတော့ Will Smith ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုရှုံ့ချထားပါတယ်။ Credit;
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ၿပီး ခဲ့တဲ့ေ အာ္စ ကာ ဆုေပးပြဲမွာ Will Smith တစ္ေယာက္ Chris Rock ကို ပါးရိုက္လို က္ခ်ိန္ရို က္ကူး ထားတဲ့ Video အသစ္ တစ္ခု ျပန႔္လာ ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ Video ထဲမွာ ပါးရိုက္ လိုက္ၿပီးျ ပီးခ်င္း Will Smith ရဲ့ဇနီးျဖစ္သူ Jada Pinkett Smith ဘာလုပ္ေ နလဲဆိုတာ ကို ေတြ႕ရမွာပါ။
ပြဲထဲမွာ ပဲရိုက္ ကူး ထား တဲ့ အဲ့ဒီ Video ထဲမွာဆို Smith က Chris ကိုရိုက္ၿပီး ထိုင္ခုံေပၚျ ပန္လာ ထိုင္ခ်ိန္ Pinkett Smith တစ္ေယာက္ ထိုင္ေနရင္း နဲ႔ခႏၶာကို ယ္ကို ေရွ႕ကိုကိုင္းညြတ္လို က္တာ ကို ျမင္ရမွာပါ။ Video ကိုေအာက္ပါ link မွာဝင္ေရာ က္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါ တယ္။
“Will Smith just smacked the s— out of me” လို႔ Chris ကေျပာၿပီးၿပီးခ်ိန္မွာပဲ သူမခႏၶာကိုယ္ေရွ႕ကိုကိုင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။Video ကေတာ့သူ ့ေနာက္ကရိုက္ထားတာမလို႔ မ်က္ႏွာကိုၿမ မင္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ခါရ ယ္ေမာၿပီး Will Smith သူ႔ေဘးမွာျပန္ထိုင္ခ်ိန္ ျပဳံးေနတာ ကိုလည္းေတြ႕ရမွာပါ။
အဲ့ဒီည၊အဲ့ဒီဆုေပးပြဲမွာပဲ Will Smith ဟာ King Richard ႐ုပ္ရွင္ကားနဲ႔အတူ အေကာင္းဆုံးအမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ခုခ်ိန္ မွာေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပါ။
အရိုက္ခံခဲ့ရသူ Chris Rock ကေတာ့ အမႈဖြင့္တိုင္ျ ကားဖို႔ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး Will Smith ကလ ည္းလူမႈကြန္ယ က္ကေနတဆင့္ Chris ကိုျပန္လည္ေ တာင္းပန္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေအာ္စကာဘုတ္အဖြဲ႕ကေတာ့ Will Smith ရဲ့လုပ္ရပ္ကိုရႈံ႔ခ်ထားပါတယ္။ Credit;
Tags:Chris Rock, Will Smith
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် သဇင်